Home विशेष लेख समाजले जानिजानी बिभेद गरेको छ एचआईभी एड्स पिडितलाई
आफ्नो भन्दा सन्तानको चिन्ता
दाङ १४ मंसिर-दाङ लक्ष्मिपुर गाविसकी एम एचआईभि पिडित महिला समाजमा संक्रमितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोष र भावनामा परिवर्तन आउन नसकेको बताउनुहुन्छ। पहिलेभन्दा केही सहज वाताबरण भएपनि जति सकारात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने हो त्यति आउन नसकेकोमा भने उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। उहाँले संक्रमितहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल हुने खालका कार्यक्रमहरुमा सहभागि गराउनुपर्ने बाउनुभयो। 'समाजमा पनि सकारात्मक रुपमा हेरिदैन पोजिटिभहरुलाई सिपमुलक तथा आयआर्जनमुलक कामको व्यबस्था सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले गर्न सके पिडितहरुलाई सजिलो हुने थियो' - उहाँले भन्नुभयो। रुकुमकी एक जना संक्रमित महिलाको समस्या पनि आर्थिक समस्या नै रहेको छ। रुकुमबाट दाङ हुँदै नेपालगन्जसम्म चेकजाँच तथा औषधि उपचारका लागि धाउनुपर्ने भएका कारण सामान्य यातायात खर्च समेत जुटाउनका लागि समस्या गरेको बताउनुभयो।
'हामीलाई त जे भयो-भयो तर हाम्रा स-साना नानी बाबुहरुलाई भोलीका दिनमा केही नहोस्। हाम्रो कारणले समस्या नपरोस हामीलाई जे भएपनि हाम्रा बालबच्चाको लागि भएपनि समाजमा खुल्न सकेका छैनौ' - एचआइभी पिडित दाङकी एक महिलाको पिडा हो यो। एचआईभी-एड्स संक्रमितलाई समाजमा स्थापित गराउनका लागि नेपालका थुर्पै संघसंस्थाहरुले अभियान पनि सन्चालन गरेका छन्। तर अझैपनि समाजमा खुलेर स्थापित हुँन नसकिरहेको अवस्था छ। दाङ प्लसकी एक जना संक्रमित आफुलाई जसले जे भनेपनि सहन तयार भएपनि आफ्नो सन्तानको भविष्यका लागि खुल्न नसकेको बताउनुहुँन्छ। 'हामीलाई जसले जे भनेपनि हामी सहन तयार छौ तर हाम्रो कारणले भोली समाजमा हाम्रो कारणले मानसिक असर नपरोस भन्ने चाहना रहेको छ' उहाँले भन्नुभयो।
एचआईभी एड्स पिडितलाई समाजमा संक्रमित भएकै कारण समाजमा बाङ्गो नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने चलन रहेको उहाँको गुनासो रहेको छ। एचआईभी एड्स आफ्नो कारणले मात्र अन्जानको गल्ति कमजोरीका कारण तथा बिनाकारण होसियारी नपनाएका कारण लाग्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि समाजमा बिभेदजन्य व्यवहार कायम रहेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 'हामी र हाम्रो छोराछोरीलाई एचआईभि पोजिटिभ भनेर विद्यालय तथा गाउँघरमा सबैले हेला गर्छन्' उहाँले भन्नुभयो 'जसका कारण हाम्रा छोराछोरीहरुमा केही रुपमा हिनताको भावना तथा हेपिएको भावनाको विकास भएको छ।'
पिडित मध्येकी लक्ष्मीपुर गाविस सुनपुरकी एक महिला भने आफुलाई खासै समस्या नभएको बताउनुभयो। आफु गाउँघरमा सहज तरिकाले बसिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। गाउँघर तथा परिवारबाट राम्रो सहयोग पाएको बताउने उहाँ समाजमा पनि नकारात्मक खालका टिकाटिप्पणीहरु सुन्ने नगरेको उहाँको भनाई रहेको छ। उहाँका एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। संक्रमणकै कारण श्रीमानको मृत्यु भएपछि अहिले चार वर्षिया छोरालाई पनि संक्रमण देखिएको छ। छोरीलाई भने दुईपटक जाँच गर्दासमेत नभेटिएको जानकारी दिनुभयो।
एच.आई.भी. एड्स यौन सम्पर्कका कारण मात्र नभएर अन्य कारणले पनि लाग्ने गर्छ। तर यसलाई बुझेर पनि नबुझे झै गर्नेहरु थुप्रै छन्। हाम्रो समाजमा यौन सम्पर्कका कारण मात्र यो रोग लाग्ने गर्छ भन्ने बुझाई तथा यौन भनेको गलत कुरा हो भन्ने सामाजिक धारणाका कारण एच.आई.भी. संक्रमितहरु समाजमा खुल्न सकिरहेका छैनन्। दाङ जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने दाङ प्लस नेपाल परिवार नियोजन संघ जिल्ला एड्स समन्वय समिति राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरु जिल्लामा क्रियाशिल रहेका छन्। यौन भनेको प्राकृतिक चिज हो र यो सबैमा हुन्छ भन्ने सकारात्मक धारणा जबसम्म समाजमा विकास हुँदैन तबसम्म एचआइभी पिडितलाई सम्मानजनक ब्यवहार हुन नसक्ने जिल्ला एड्स समन्वय समितिका संयोजक जीवन देवकोटाको भनाई रहेको छ।
एड्सको मुख्य कारण एच.आइ.भी. भाइरस नै भएको कुरा वैज्ञानिक सत्यतामै आधारित कुरा हो तर एड्सको विरामीलाई रोगको संक्रमण बढ्ने क्रममा मुख्य रुपमा निम्न किटाणुको संक्रमण बढ्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। Pneumocytis carinii ले निमोनिया, Mycobacterium aviu m intracellulare, cytomegalovirus को साथै क्षयरोग, भिरङ्गी, Herpes, क्यान्सर आदि।
संक्रमित व्यक्तिसंगको असुरक्षित यौन क्रियाकलाप एच.आइ.भी. संक्रमित आमाबाट जन्माइएका शिशुहरुमा शुरक्षित नभएरै जन्मदा संक्रमित रगत transfusion भएमा निर्मूलीकरण नगरिकनै प्रयोग गरिने सुई तथा निडिलहरुबाट एच.आई.भी. भएको विर्य, योनीको पानी, रगत तथा रक्तकोषिकाहरुबाट समेत रोग सर्दछ तर हाम्रो समाजमा एचआइभी एड्सको संक्रमणको कारण धेरैले महिला आमा नै दोषी भएको भन्ने चलन रहेको छ। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुष तथा महिलाले कोसेलीको रुपमा यो भयानक रोग ल्याई घर परिवार तथा देशवासीहरुलाई फैलाउने क्रम बढ्दो छ। उत्पादित कण्डमको प्रयोग नगरेर वा गलत प्रयोगले समेत रोगहरु सर्ने क्रम बढिरहेको छ।
मुख्यतः २५ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका मानिसमा यो रोग देखिए पनि अछुतो कुनै उमेर समूह छैन। करीब सन् १९९० दशककै एक अनुसन्धानले ६०% देखि ८०% HIV संक्रमित विरामीहरु समयमै औषधि सेवन नगरेमा १० वर्षभित्रै एड्समा रुपान्तरित हुने वा HIV को Sero conversion भइसक्ने देखाएको छ। विश्व एड्स दिवस आज बुधवार डिसेम्वर-१ विश्वभर मनाईदैछ। यो दिवस मनाउन थालेको पनि लामो समय भैसकेको छ। तर अहिले पनि एचआइभी उड्स पिडितलाई सम्मान जनक व्यवहार सम्म गर्न सकेको छैन। समाजमा रहेको संक्रमितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यो दिवस संगै परिवर्तन आओस्।